Desmume, pamwe yakanakisa Nintendo DS emulator yeGnu / Linux | Linux Vakapindwa muropa
Gnu / Linux haina kuzivikanwa nekushamwaridzana kune avo vanonyanya kushandisa gamer. Kuenderana kwaro kwakashata nemitambo yemavhidhiyo ePc kunoita kuti Gnu / Linux ishandiswe zvishoma mashandiro mu komputa yedesktop, asi zvishoma nezvishoma izvi zviri kuchinja.
Parizvino, kuwedzera kune iyo Steam chikuva, Vashandisi veGnu / Linux vane mukana wekushandisa emitambo yekunyaradza yemitambo inotibvumidza kutamba mitambo kubva kuSony's PlayStation kana Microsoft yeMicrosoft. Mukati mechikamu chevamiririri, pasina kupokana DesMuMe ndiyo inonyanya kuzivikanwa uye inozivikanwa emulator.
DesMume chirongwa chinoteedzera Nintendo's inotakurika mutambo mutambo, ndokuti, Nintendo 2DS, DS uye GameBoy Pamberi. Izvi zvinosanganisira kuve nemukana wekutamba akawanda emitambo mazita pamwe nekununura macartridge ekare atinawo kumba, kana isu takashandisa kana kuve nechero eaya enyaradzo.
DesMume inopa kuenderana nemapikicha emitambo uye joystiks asi yakanyanya kugadzikana iri shandisa keyboard yedu yekombuta. Kune izvi isu tinoshandisa iyo Z uye X kiyi seA uye B mabhatani pane iyo koni; museve makiyi sekufamba kwekudzora uye iyo A uye S kiyi kutevedzera iyo yekutanga uye Sarudza bhatani. Asi kumisikidzwa uku kunogona kuchinjirwa mukuda kwedu uye kusarudza chero imwe kiyi yeaya mabasa.
DesMume irimo mune angangoita ese maGnu / Linux kugoverwa. Saka kuiisa zvichave zvakakwana kushandisa software maneja wekugovera. Mune ese iwo iwo murairo «desmume» unoshandiswa kuitisa kana kuiisa. Nekudaro, pasina kugovera iwe unowana iyo yakaiswa mitambo. Kuti tiite izvi, isu tinofanirwa kutsvaga mutambo pamwe nekuwedzera mads kana .gba. PaInternet iwe unowana akawanda maRom eiyi emulator, asi mu Internet Archive pane mafaira epamutemo.
Chokwadi ndechekuti Nintendo inotakurika koni inotaridzika senge komputa, asi ndinofanira kubvuma izvozvo nemidziyo miviri, tinogona kupedza maawa nemaawa ekunakidzwa. Iwo mavara uye mashandiro haana kumbosiyana muDesMume uye inogona kuve mhinduro kune avo vanoda kununura mitambo yeiyo isina basa GameBoy. Icho chaicho chakanakira imwe yevanoda mutambo wevhidhiyo vane zviwanikwa zvishoma. Haufungi here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Desmume, pamwe yakanakisa Nintendo DS emulator yeGnu / Linux
Desmume haiteedzere GBA kana 3DS / 2DS